Ungalisebenzisa kanjani iZwi mahhala: zonke izinzuzo zenguqulo eku-inthanethi ye-Office | Izindaba zeWindows
Ungalisebenzisa kanjani iZwi mahhala: zonke izinzuzo zenguqulo eku-inthanethi ye-Office
Kuze kube namuhla, i-suite ye- IMicrosoft Office kuvela ukuthi isetshenziswa kakhulu ngabasebenzisi abaningi. Ekuqaleni yayitholakala kuphela kumakhompyutha ane-Windows ne-MacOS, futhi ngokuhamba kwesikhathi ukuthandwa kwayo okukhulu kuholele ekwethulweni kwezinguqulo eziguqulelwe ezinye izinhlelo ezisebenzayo, kufaka phakathi i-Android, i-iOS kanye nenguqulo yewebhu esele.
Ngokukhethekile, Le nguqulo yewebhu yakamuva ilusizo kakhulu kubo bonke abantu abangenayo i-Microsoft Office efakwe kumakhompyutha abo nokuthi badinga ukudala ifayela le-Word, Excel noma le-PowerPoint, ngoba ngale ndlela kulula kakhulu ukulifinyelela ngqo kusuka kusiphequluli uqobo, ngaphandle kokufaka noma yini futhi, okungaba mnandi kakhulu, ngaphandle kokukhokha. Ngalesi sizathu, sizokukhombisa zonke izinzuzo zokusebenzisa inguqulo yeZwi eku-inthanethi kumakhompyutha akho.
1 I-Word Online: nansi indlela esebenza ngayo inguqulo yamahhala ye-Word esemthethweni ye-Microsoft
1.1 Ngakho-ke ungasebenzisa i-Word Online ukuhlela amadokhumenti
1.2 Ukusebenza efwini nakho kunezinzuzo zako
1.3 Izici ezincishisiwe kepha zanele kwezinye izimo
I-Word Online: nansi indlela esebenza ngayo inguqulo yamahhala ye-Word esemthethweni ye-Microsoft
Njengoba sishilo, ngaphandle kwezimo ezifana lokho kwabafundi noma ezinye izikhungo, ukuze ukwazi ukusebenzisa iZwi neminye imikhiqizo ye-Microsoft Office kufanele ungene ebhokisini, ingakhangi kakhulu kubasebenzisi abaningi naphezu kwazo zonke izinketho abazinikezayo (ngenyanga, ngonyaka noma inkokhelo eyodwa).
Izindlela ezingcono kakhulu zamahhala zeMicrosoft Office
Kodwa-ke, uma udinga ukuhlela imibhalo ye-Microsoft Word ngezikhathi ezithile, noma ufuna ukwenza izinguquko eziyisisekelo kumafayili naku- ezinye izindlela ezifana ne-OpenOffice azikwenzi ukholwe, mhlawumbe i-Office Online iyindlela ongayibheka.
Ngakho-ke ungasebenzisa i-Word Online ukuhlela amadokhumenti
Kulokhu, awudingi ukulanda noma yimaphi amafayela ukuze usebenzise inguqulo eku-inthanethi ye-Microsoft Word. Imfuneko kuphela yokuyisebenzisa ukuthi ube nokuxhumeka kwe-inthanethi okusebenzayo ne-akhawunti ye-Microsoft (i-Outlook evumelekile, i-Hotmail, i-Live ...). Ukufeza lokhu, ukuqala ukuhlela amadokhumenti kufanele nje finyelela ekhasini lasekhaya le-Word Online ngokusebenzisa isiphequluli sakho.
Kulokhu, kufanele faka iziqinisekiso ze-akhawunti ye-Microsoft ukuze uqalise, bese uzokwazi ukufinyelela isihleli esiku-inthanethi seZwi, okuthi noma sincane kunenguqulo yedeskithophu, esinayo yonke imisebenzi eyisisekelo.
Kuyini nokuthi ungalisebenzisa kanjani iZwi Online
Ukusebenza efwini nakho kunezinzuzo zako
Ngeqiniso lokuthi une-akhawunti ye-Microsoft, unayo 5GB wesitoreji mahhala efwini le-OneDrive. Lesi sikhala, ngaphezu kokukwazi ukusetshenziselwa ukugcina noma yiluphi olunye uhlobo lwamafayela uma ufuna, sizosetshenziswa futhi yi-Word Online. Ngale ndlela, izinguquko ezenziwe kumadokhumenti zigcinwa kumaseva we-Intanethi ngaleso sikhathi, ukuze uma kwenzeka inhlekelele kukhompyutha osebenza kuyo ngeke kube nankinga ekutholeni izinguquko zakamuva.
Futhi, lokhu akugcini lapha. Ngenxa yamathuluzi wokusebenzisana we-Microsoft Office, ungaba idokhumenti nanoma ngubani omfunayo, ukuze babe nemvume yokubona ushintsho olwenzayo futhi basebenzisane nabo nawe ekuhleleni idokhumenti, ukuze amafayela ahlelwe yibo bobabili ababambiqhaza ngasikhathi sinye.
Ngingakwazi ukufaka iLibreOffice neMicrosoft Office kukhompyutha efanayo?
Izici ezincishisiwe kepha zanele kwezinye izimo
Njengoba sishilo, inguqulo eku-inthanethi ayinakuqhathaniswa nenguqulo yedeskithophu yale suite, ngoba imisebenzi iyindlala impela futhi ayisebenzisi ngaphandle koxhumano lwe-inthanethi ayivunyelwe. Noma kunjalo, kungahle kube ngokwanele kwabanye abasebenzisi ukuhlela imibhalo yabo ye-Word uma kwenzeka uyidinga.
Uma kwenzeka ishoda, ngakolunye uhlangothi kukhona ukuthuthuka okukhokhelwayo ngaphakathi kweHhovisi, njengokubhaliselwe kweMicrosoft 365, ngaphezu kwe Kukhona neGoogle Workspace, ehlanganiswe neGoogle Drayivu, iWork ehlanganiswe ne-Apple's iCloud noma iZoho, isixazululo sigxile ezinkampanini ezithuthukisa ubumfihlo. Zonke zikuvumela ukuthi wenze okufanayo kepha ngokusebenza okuhlukile, futhi esimweni sokudinga isixazululo esingaxhunyiwe ku-inthanethi kuhlale kunezinye izindlela ezifana ne-OpenOffice noma LibreOffice, itholakalela ukulanda mahhala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » I-Microsoft Office » Ungalisebenzisa kanjani iZwi mahhala: zonke izinzuzo zenguqulo eku-inthanethi ye-Office
Ivalelisa ku-Excel: ezinye izindlela ezintathu eziphelele zesipredishithi
Ngingaxhuma nge-desktop yedeskithophu (i-RDP) kwikhompyutha ye-Windows kusuka ku-iPad?